Ingozi yothando lwehaba | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 20/07/2021 22:36 | Ubudlelwano
Ukukwazi ukuthanda umuntu kuyinto enhle kakhulu abantu abaningi abanenhlanhla ukuyizwa. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngokuthanda kubalulekile ukusungula uchungechunge lwemikhawulo ngoba uma kungenjalo uthando olunjalo lungaphenduka inkanuko eyingozi yalowo muntu.
Esihlokweni esilandelayo sikukhombisa umehluko okhona phakathi kothando olunempilo nokuzibandakanya.
1 Ukuqaphela akulingani nothando
2 Okufanele ukwenze ngokuziphatha okweqile
Ukuqaphela akulingani nothando
Ebudlelwaneni obunempilo, uthando kufanele luhlale luhlala njalo. Uma, ngokuphambene nalokho, ukukhathazeka kugcina sekuvela, lo mbhangqwana uba yingozi kukho konke okubi okukubandakanya.
Ukuvela kokuziphatha ngokweqile ikakhulu kungenxa yokuntuleka kokuphepha nokuzethemba ngelinye lamaqembu asebudlelwaneni. Ngokolunye uhlangothi, ukuthatheka kuyisusa ngokuphelele inkululeko yomlingani futhi kukukhawulela kuzo zonke izinhlobo zezenzo, into okungafanele ivunyelwe kunoma yiluphi uhlobo lobudlelwano.
Ngokwengxenye yalo, uthando lunikeza inkululeko nenhlonipho, into ebalulekile kunoma yimuphi umbhangqwana ozibheka njengophilile. Kukhona ukuzibophezela okuthile kubo bobabili abantu, kepha abanqunyelwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, okuthile okunomthelela omuhle ekusaseni elihle labashadikazi.
Okufanele ukwenze ngokuziphatha okweqile
Awukwazi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuvumela ukuthi uqhubeke nobudlelwano lapho ukuziphatha okweqile kuphumelela kunoma yikuphi okunye. Umuntu okudingwa ngaye kufanele abunqamule ngokushesha lobu budlelwano obunobuthi. Kubalulekile ukuthi izithandani zihlale phansi zihlaziye isimo ngendlela ezolile bese ubheka isizathu sokuthi kungani kwenzeka uthando olunje lokuzenzisa.
Uzwela luyigugu elibalulekile lapho ubhekene nale nkinga. Kuhle-ke ukuthi umuntu okhathazekile angazifaka ezicathulweni zendaba, ezwe futhi azi ukuthi lokho kuziphatha kuyasola ngokuphelele. Uthando kuzithandani kusho ukuhlonipha umuntu omthandayo nokukwazi ukubathemba ngokungaboni.
Ezimweni eziningi, lolo thando olubukhali lubangelwa ikakhulu ukungabi bikho kokuphepha nokuzethemba. Ngakho-ke kubalulekile ukusiza umuntu okhathazekile ukuba athole ngokushesha ukuzethemba futhi ukuqinisa ukuzethemba kwakho. Ukunqoba ukungazethembi kubalulekile uma kukhulunywa ngokuhlonipha umlingani wakho nokukwazi ukubathanda ngendlela enempilo.
Uma izinto zingathuthuki, kunconywa ukuthi uye kuchwepheshe omuhle okwaziyo ukubhekana nenkinga kwasekuqaleni nokubeka isisombululo kuyo. Lonke usizo lincane ukuze unqobe ukukhathazeka okunjalo phambi kombhangqwana.
Ngamafuphi, yize imibhangqwana eminingi ingayiboni inkinga yayo, Ukuthanda akufani nokukhathazeka ngokweqile ngothandekayo. Uthando kumele lube nempilo ngaso sonke isikhathi futhi ukuphela kwalo kufanele kube ukuvela ndawonye ukuze uthole inhlalakahle kanye nenjabulo. Ukwenza lokhu, kufanele uqale uzithande futhi uzithande futhi ukusuka lapho, ukwazi ukuthanda umlingani wakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Ingozi yothando lwehaba